Ịgha mkpụrụ na-edozi ụbọchị | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ịgha mkpụrụ na-edozi ụbọchị
Ndepụta nke ọrụ na ubi na ogige, na-akụ mkpụrụ maka ọnwa n'ọnwa December 2017
N'oge oyi, oge ezumike na ụra na-amalite n'oge okpomọkụ n'oge osisi. Nke a apụtaghị na ọrụ adịghị gị. Ọ dị mkpa iji nyochaa osisi oyi, kpuchie ha na snow, na-echebe ha site na pests. E nwere ọrụ na greenhouses, ubi, na osisi ime ụlọ. Onye nlekọta ubi, onye na-elekọta ubi na onye na-elekọta ubi, ihe ị ga-eme n'oge mbido December N'ọnwa Disemba, na-esote ubi gardener n'ọnwa Disemba 2017, na-agagharị na ogige ahụ, kọwaa snow n'akụkụ ogige nke saịtị ahụ: ọ ga-eme ka o siere obere nsí ike ịmalite.
Kalịnda ụbọchị nke onye na-elekọta ubi na onye na-elekọta ubi maka March, 2019
Ihe ndi nchoputa sayensi na-achoputa ihe omumu nke ugbua n'elu uwa, ya mere, o bu ihe ijuanya na otutu ndi oru ubi na ege nti nke ndi na-agu kpakpando n'ubi ihe ubi. Na ọnwa ọ bụla, usoro a ga-enwe àgwà nke aka ya, nke pụtara na ekwesịrị ịtụle kalenda ndị na-agụ kpakpando n'ime afọ.
Ịgha mkpụrụ Kalinda na February 2019
Ịhọrọ oge maka ihe ọkụkụ, transplants, kwachaa na ubi ndị ọzọ na usoro nhazi, ndị na-elekọta ubi na-aṅa ntị na kalenda ọnwa. Ụdị nke ọnwa na-emetụta ụzọ osisi si eme ihe n'ụzọ ọzọ n'amaokwu ụfọdụ. Na February kalenda gardener ke 2019 na mma ụbọchị maka ọrụ ugbo - gụọ n'okpuru.
Agụmakwụkwọ na-edozi ọnwa maka November 2019
Banyere mmetụta nke ọnwa na usoro iheomume nke na-ewere ọnọdụ na Ụwa, ọ dịla anya a maara ihe a kpọrọ mmadụ, na ndị nna nna anyị, na-aghọtachaghị ihe kpatara nsogbu a, mụta iji ya mee ihe ha, gụnyere mgbe ị na-eduzi ụdị ọrụ ugbo dịgasị iche iche. Kalenda kalenda nke ejikọtara maka nke a nwere ike bara uru ọ bụghị naanị nye onye ọrụ ugbo ma ọ bụ onye bi n'oge okpomọkụ, kamakwa onye hụrụ ụlọ osisi.
Agụmakwụkwọ na-edozi ụbọchị na gardener na 2019 maka Urals
Ebe ọ bụ na n'oge ochie, ihe a kpọrọ mmadụ ejirila ihe ndị dị n'eluigwe mee ka ihe dị mkpa maka ọrụ ubi: ịgha ihe na oge owuwe ihe ubi. Isiokwu ahụ na-elekwasị anya na njirimara nke kalịnda kọnfọn nke onye na-ese okooko osisi na onye na-elekọta Urals na 2019. Kedu ihe mmetụta nke ọnwa na-eto eto na osisi. Ọtụtụ osisi nwere ihe karịrị 80% mmiri, ya mere mmasị nke ọnwa nwere mmetụta dị oke n'ahụ ha, yana mmiri n'ime mmiri.
Kalịnda nke ọnwa nke ịkụ tomato na 2019
Ụfọdụ ndị ọrụ ugbo na-akụ mkpụrụ tomato maka seedlings na-eleba anya ma oge akọwapụtara site n'aka onye malitere na ebe ọnwa na-adị ugbu a. Ndị ọkà mmụta sayensị kwadoro mmetụta nke ụwa na satịlaịtị n'elu ihe ndị dị ndụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, na osisi - ya mere, ụzọ a bụ zuru oke. Ụbọchị kachasị mma maka ịkụ tomato na 2019 dịka kalenda ọnwa na-atụlekwuo na isiokwu ahụ.
Kalịnda nke ọnwa maka violets 2019
Saintpaulia bụ osisi na - achọsi ike - oge a na - ahọrọghị oge maka transplantation nwere ike imebi ọdịbendị. Kalịnda nke ehihie na-enyere aka ịhọrọ oge kacha mma maka ịgha mkpụrụ na ịkụgharị ifuru. Mgbe ị na-eme ihe na 2019, gụọ ebe a. Kedu ka osisi si emetụta akụkụ nke ọnwa?